Home Wararka RW Rooble oo xilka ka qaaday Cabdullaahi Kullane (Jiis Mariixaan)
[DEG DEG Daawo] RW Rooble oo xilka ka qaaday Cabdullaahi Kullane (Jiis Mariixaan)
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa xilka ka qaaday C/llaahi Kulane (Jiis Mariixaan) oo ahaa Madaxa Shaqaalaha NISA iyo Taliyaha Nabadsugida ee Garoonka Aadan Cadde C/wahaab Sheekh Cali, kaddib markii maanta ay jabiyeen amarkii Ra’iisul Wasaaraha ee ahaa in aan garoonk diyaaradaha Aadan Cadde lagu xayiri karin Muwaadiniinta Soomaaliyeed.
C/llaahi Kulane (Jiis Mariixaan) ayaa ahaa nin Awood badan ku lahaa NISA, sidoo kale malafka Arrimaha Gobolka Gedo ninka u hayay MW Muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Kullane Jiis ayaa awooddiisa NISA waxay gaarsiisneyd sida Taliye Kuxigeen NISA, inkastoo uusan marnaba ku magacawoneyn xilkaas. Guddoomiyihii hore ee Gobolka Gedo Cismaan Nuur Xaaji Macalimuu ayaa shaaciyey in maanta laga celiyey garoonka diyaradaha magaalada Muqdisho, isagoo kusii jeeday Gobolka Gedo.
Shir jaraa’id oo uu ku qabtay caasimadda Muqdisho ayuu ku caddeeyay inuu safar u ahaa Gobolka Gedo, balse laga soo celiyey garoonka Diyaaradaha, si cad loogu sheegay inay heysato Nabadsugidda, gaar ahaan ninka lagu magacaabo C/llaahi Kulane (Jiis).